Standard uye Policies
SUNSOUL inobva zvedu nyanzvi uye kubatana chikwata, isu zvakagadzira siyana repairing tire zvigadzirwa, akadai Valve Hardware, ponji kugadzira & muwedzero, Chemical Solutions, Tire uye Wheel Service uye Air Tools, Hoses uye Accessories nezvimwewo, uye isu kudzora unhu zvakakomba ezvinhu basa kusangana OEM mureza uye chinodiwa. Nokuda kwedu zvine mutengo uye akakodzera basa, isuwo kupa customized nokuda Amazon uye musika chitoro. In kwakavakirwa administrate sezvo TS16949 ezvinhu, kwedu kazhinji kugadzirwa zvibereko vhiri mavharuvhu uye vhiri masimbi uyewo kusangana Trả, ETRTO International Standard.
SUNSOUL vaunze kunobatsira kukura kuitira inogona kuenderera kubudirira leveraging edu akanaka mabhizimisi Portfolio. Tikavavarira kukwana uye utevere excellence.Outstanding vashandi ndivo hwaro yekubudirira kambani yedu. Tsika dzedu kambani kunoratidzwa kushinga, pachena uye kuremekedzana. Tinokurudzira vashandi vedu kutora muridzi uye zvikure pamwe chete kambani.
SUNSOUL zvikuru vaikoshesa zvose shamwari 'pamwe, tine chivimbo muna dzichiri kutevera nyika muitiro.
Regai yedu ruzivo kuzvishandira iwe !!